Beginner For Android Programming ( Android Eclipse ကိုစတင်အသုံးပြုခြင်း Hello World program ) - အခန်း (၂) - အောင်အောင်ဆွေ Blog
Beginner For Android Programming ( Android Eclipse ကိုစတင်အသုံးပြုခြင်း Hello World program ) - အခန်း (၂)
အခန်း(၁) မှာ Android Program တစ်ခုစရေးဖို့ ကိရိယာ အစုံအလင်ပြောပြ ပြီးပါပြီ ... တစ်ကယ် စရေးမှာက အခုမှပါ..အဲ ရေးတယ်လို့ တော့ မခေါ်သေးပါဘူး .. Eclipse ကို စမိတ်ဆက်ပေးမှာပါ ..
ADT Bundle အောက်က Eclipse Folder ထဲက Eclipse.exe (ခရမ်းရောင် အလုံးပုံ) လေးကို ကလစ်နှစ်ချက် နှိပ်ပြီး စဖွင့်လိုက်ပါ ..
ဒီလိုပုံလေးတက်လာပါမယ် .. နောက် ဒီလိုပုံနဲ့ WorkSpace နေရာကို သိမ်းမယ့်နေရာကိုမေးပါလိမ့်မယ် .. OK ပဲနှိပ်ပေးလိုက်ပါ ..
ပြီးရင်တက်လာမှာကတော့ ဒီပုံတော့ မဟုတ်ပါဘူး ... Eclipse ရဲ့ Home Page / Start Page ပါ .. ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါ .. ဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူး .. Page ကို ပိတ်လိုက်တာပါပဲ ...
ပြီးရင် .. Android Application Project အသစ်တစ်ခု စယူပါမယ် ... ဒီပုံထဲက အတိုင်းလုပ်လိုက်ပါ .. ပြီးရင် အောက်က ပုံတွေ အတိုင်း အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ပါ .. သတင်းထဲက အတိုင်းပြောရရင် .. လိုအပ်သည်များကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ ...
နောက်တစ်ဆင့်ကိုလဲအောက်က အတိုင်း လုပ်ပါ ..
ဘာမှပြောင်းပေးစရာ မလိုပါဘူး ..
Next နှိပ်ပြီးနောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားလိုက်ပါ ..
ဒီအဆင့်မှာတော့ သင့်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည် ..
Image ဖြင့် သင့် Logo ကိုလုပ်ချင်လျှင် Browse မှတစ်ဆင့် သင့်ပုံကိုရွေးနိူင်သလို . နဂို ရှိပြီးသား ပုံတွေထဲကဆိုရင် Clipart ကိုရွေးပြီး ရွေးချယ်နိုင်ပါ တယ်. Text ထဲမှာတော့ Logo ကို စာနဲ့ လုပ်နိုင်ပါတယ်. မြန်မာဖောင့် ပြောင်းပြီးတော့ လဲမြန်မာလိုရေးနိုင်ပါတယ်. အောက်က Option တွေကတော့ ပုံနဲ့ ရှင်းပြထားပါတယ် ..
ပြီးရင်တော့ Next နှိပ်ပါ ..
နောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့နေရာမှာတော့ Finish ကိုရွေးပြီးထွက်လိုက်ပါ .. FullScreen Activity တွေ Master/Detail Flow တွေကို ရွေးနိုင်ပေမယ့် API (Android Version အနိမ့်တွေမှာ အလုပ်မလုပ်ပါဘူး) နောက်နေရာမှာတော့ ပုံကအတိုင်းလုပ်လိုက်ပါ .
ပြီးရင်တော့ သင့်ရဲ့ Android ဖုန်းကို (USB Driver သွင်းပြီးသားဖြစ်ရပါမယ် Computer ကသိနေမှရပါမယ် ) USB ကြိုးထိုးပြီး ကွန်ပြူတာမှာ လာ Join ထားပါ.. Driver သွင်းထားနော် .... မမေ့နဲ့ 
USB Driver မရှိရင် အလုပ်မလုပ်ဘူး ..
ဒီမှာတော့ ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ပုံက လွဲနေပါတယ် . အဆင့်ကတော့ ဒီအတိုင်းပါပဲ .. သင်တို့ လုပ်ထားတဲ့ နာမည်ပေါ်ကိုပုံအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ ..
ပုံအတိုင်းနှိပ်လိုက်ရင် Run As ဆိုတဲ့ Box လေးပေါ်လာပါမယ် .. အပေါ်ဆုံးက Android Application ဆိုတာကို နှစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ ..
နောက်အခုလို သင့်ကွန်ပြူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်မိနေတဲ့ Android Device ကိုပြပေးပါတယ် .. သူ့ အပေါ်မှာ ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ .. ဒါဆိုရင်တော့ အောက်က ပုံအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပြီး သင့်ဖုန်းမှာ ပေါ်လာတဲ့ ပုံကိုစောင့်ကြည့်လိုက်ပါ ..
ဒီပုံကတော့ သင့်ဖုန်းပေါ်မှာပေါ်တဲ့ ပုံပါ ...
ဒီ Hello World ဆိုတဲ့ Program ကဘာလို့ သင်ဘာမှ မရေးပဲ ပေါ်လာရတာလဲဆိုတော့ .. ရှင်းပါတယ် ... နဂိုထဲက ပါလို့ ပါ .. နောက်အခန်းကျမှ ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ App အလွယ်လေးတွေ စပေးပါမယ် .. ဒါကတော့ Eclipse မိတ်ဆက်မို့ လို့ ပါ ..
Android Programming Page